moi: January 2017
ဂျပန်နိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ်၏ ဇနီးနှင့်အဖွဲ့ ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိ
ရန်ကုန် - ဇန်န၀ါရီ ၃၁
Greater Mekong Initiative ၏အစီအစဉ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေသည့် ဂျပန်နိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် မစ္စတာရှင်ဇိုအာဘေး၏ဇနီး Mrs. Akie Abe နှင့်အဖွဲ့သည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင်
Posted by moi at 9:57 PM No comments:
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့် ဦးဆောင်သော မြန်မာကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့ အီတလီနိုင်ငံသို့ ခရီးထွက်ခွာ
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်နှင့် အဖွဲ့သည် အီတလီနိုင်ငံ၊ ရောမမြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Myanmar Country Presentation Program သို့ တက်ရောက်ရန် ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ ထွက်ခွာ ခဲ့ရာ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူများမှ လိုက်ပါပို့ဆောင် နှုတ်ဆက်ကြသည်။
အဆိုပါခရီးစဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာနှင့် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများ တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး၊ အီတလီနိုင်ငံမှ လုပ်ငန်းရှင်များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရာတွင် အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ရရှိနိုင်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူ အချင်းချင်းဆက်ဆံရေး၊ အစိုးရချင်း ဆက်ဆံရေးများ တိုးတက်စေရန်နှင့် မြန်မာ-အီတလီ နှစ်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးတက်လာစေနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သွားရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့မှ အစိုးရအရာရှိကြီးများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်၊ ဥက္ကဌ ဦးဇော်မင်းဝင်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ လိုက်ပါသွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပုဂံရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဒေသရှိ စေတီပုထိုးများနှင့် သာသနိက အဆောက်အဦများ ပြန်လည်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် တတိယအကြိမ် အလှူငွေ လှူဒါန်းပွဲ ကျင်းပမည်
နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ ၃၁
၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ် ၂၄ ရက်က လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် မြေငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ပြိုကျ ပျက်စီးသွားသော မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး၊ ညောင်ဦးခရိုင်၊ ပုဂံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေ အနှစ်ဒေသရှိ စေတီပုထိုးများနှင့် သာသနိက အဆောက်အဦများ ပြန်လည်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌ တတိယအကြိမ် အလှူငွေလှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ (၅)ရက်၊ မွန်းလွဲ (၁)နာရီတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေ ဝိဇယမင်္ဂလာ ဓမ္မသဘင်နေရာ၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သူရဦးအောင်ကိုက လှူဒါန်းမှုများကို လက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်၍ လှူဒါန်းလိုသူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ရန် နှိုးဆော်ထားကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by moi at 9:46 PM No comments:
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်‌ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီးများအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၃၁
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်‌သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Andrew Patrick ၊ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Peter Lysholt Hansen ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Scot Marciel နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ရုံး ယာယီတာဝန်ခံ Mr. Colin STEINBACH တို့အား ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် လွှတ်တော်၏ ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်‌ ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် နှင့်‌ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပန်ကြားချက် (၂၀၁၇) ဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲ တက်ရောက်
နေပြည်တော် ဇန်န၀ါရီ ၃၁
အမျိုးသား လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ ဒေါ်သန်းငွေတို့သည် ယမန်နေ့နံနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင် အိန္ဒိယ သမ္မတနိုင်ငံ ဒေလီမြို့ Taj Palace Hotel ၌ ကျင်းပသည့် (၁၂)ကြိမ်မြောက် အနာကြီး ရောဂါရှင်များအား မနှစ်မြို့မှုနှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံရေး အဆုံးသတ်ရေးအတွက် ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာပန်ကြားချက် (၂၀၁၇) ဆွေးနွေးပွဲဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်သည်။
Posted by moi at 9:08 PM No comments:
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Dr. NikolayListopadovသည် ယနေ့ မွန်းတည့် (၁၂) နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံသည်။
လာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတ နိုင်ငံဝန်ကြီး ရွှေတိဂုံ စေတီတော်သို့ သွားရောက်ကြည်ညို
ရန်ကုန်မြို့တွင်ရောက်ရှိနေသည့် လာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံပညာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး H.E. Mrs. Sengdeuane LACHANTHABOUNE သည် အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူယနေ့နံနက် (၁၀)နာရီ တွင် ရွှေတိဂုံစေတီသို့ သွားရောက်ဖူးမြော်ကြည်ညိုပြီး ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ် တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်သည့် နည်းဥပဒေဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့နံနက်(၉)နာရီတွင် နေပြည်တော်၌ကျင်းပသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် နည်းဥပဒေဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်၍ အမှာစကားပြောကြားသည်။
Posted by moi at 8:36 PM No comments:
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi receives Special Advisor to Japanese PM
State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs Daw Aung San Suu Kyi received the Special Advisor to Japanese Prime Minister H.E. Mr. Hiroto Izumi at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw yesterday.
Posted by moi at 10:42 AM No comments:
Rakhine investigation commission asks for more Farmers to boost saltwater prawn, time due to new human rights allegations
The government commission charged with investigating the violent attacks in October and November in Maungtaw Township, Rakhine State said yesterday that they need more time before submitting their report due to new human rights allegations, according toastatement from the president’s office.
2nd Pyithu Hluttaw fourth regular session holds its first day meeting
At yesterday’s Pyithu Hluttaw meeting, the responsibilities of tender winners in agriculture projects, democratic standards, andarecent visit to the United Kingdom by the speaker were discussed.
Senior General Min Aung Hlaing receives Ambassador of Canada
Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing received Canadian Ambassador to Myanmar H.E. Mrs. Karen MacArthur yesterday morning at Bayintnaung guest house in Nay Pyi Taw.
Posted by moi at 10:36 AM No comments:
President U Htin Kyaw meets special adviser to Japanese PM
U Htin Kyaw, the President of the Republic of the Union of Myanmar, received Mr. Hiroto Izumi, special adviser to the Prime Minister of Japan, yesterday morning at Credential Hall at the Presidential Palace in Nay Pyi Taw.
Posted by moi at 10:33 AM No comments:
President U Htin Kyaw and wife to visit Cambodia
U Htin Kyaw, President of the Republic of the Union of Myanmar, and wife Daw Su Su Lwin will payaState Visit to the Kingdom of Cambodia in the near future at the invitation of His Majesty Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, King of the Kingdom of Cambodia.
Posted by moi at 10:31 AM No comments:
Vice President attends Union Day committee meeting
U Myint Swe, Vice President and Chairman of the 70th Anniversary of the Union Day Convening Central Committee 2017, addressed the 3rd co-ordination meeting held at the Office of the President yesterday, where he asked the committee to resolve any remaining issues.
Press release regarding assassination of U Ko Ni
1. U Ko Ni, legal adviser of National League for Democracy, was assassinated at5pm on 29th January at Yangon International Airport upon return from Indonesia via Singapore.
Posted by moi at 10:28 AM No comments:
Police ask public for information on fatal shooting Sunday at Yangon airport
The Myanmar Police Force (MPF) issued an announcement yesterday requesting that people with information on anyone involved in the fatal shooting Sunday of U Ko Ni,aprominent legal advisor of the National League for Democracy, should come forward.
Posted by moi at 10:26 AM No comments:
Tatmadaw to aid in investigation of U Ko Ni assassination
One day after U Ko Ni,asenior legal advisor to the National League for Democracy, was assassinated in front of Yangon International Airport at about5pm on Sunday, the Tatmadaw has offered its help in the investigation, officials said.
Posted by moi at 10:23 AM No comments:
Posted by moi at 10:22 AM No comments:
THE Maungtaw District Fishery Department has summitedaproposal foradevelopment project to boost saltwater shrimp and prawn production in Maungtaw Township to the state government, said U Naing Win Thein, assistant director of Maungtaw District Fishery Department.
Posted by moi at 10:21 AM No comments:
ပြတိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ပစ္စည်းများ ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရှေးဟောင်း သုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက် ဦးစီးဌာနနှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံ Aus Heritage တို့ပူးပေါင်းကာ အမျိုးသား ပြတိုက်(နေပြည်တော်)တွင် ဇန်နဝါရီ (၃၀)ရက်မှ ဖေဖော်ဝါရီ (၂)ရက်အထိ
Posted by moi at 11:17 PM No comments:
ပြည်ပအလုပ်အကိုင် ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းဆိုင်ရာ အမျိုးသား လုပ်ငန်း စီမံချက်တို့တွင် ကျား/မရေးရာ ကိစ္စရပ်များ ထည့်သွင်း နိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားအဆင့် မူဝါဒဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနနှင့် UN-Women တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသော ပြည်ပအလုပ်အကိုင် ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း ဆိုင်ရာအမျိုးသား လုပ်ငန်းစီမံချက် တို့တွင် ကျား/မရေးရာကိစ္စရပ်များ
ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းမှုထိန်းသိမ်းရေးသင်တန်း UN Peacekeeping(Platoon Size) Contingent Training Course ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်
နေပြည်တော်၊ ဇန်န၀ါရီ- ၃၀
မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် အိန္ဒိယတပ်မတော်တို့အကြား လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ရပ် အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်သော ဒုတိယအကြိမ် ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းမှု ထိန်းသိမ်းရေးသင်တန်း UN Peacekeeping(Platoon Size) Contingent Training Course ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ Park Royal ဟိုတယ်၌ ကျင်းပည်။
ကျောင်းသား/သူများအား မူးယစ်ဆေးဝါးအကြောင်း အသိပညာပေးဟောပြော
စစ်တွေ ဇန်န၀ါရီ ၃၀
စစ်တွေမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် စစ်တွေလူငယ် မူးယစ်ဆေးဝါး နှိမ်နင်းရေး အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းပြီး စစ်တွေမြို့ပေါ်ရှိ အခြေခံ ပညာကျောင်းများတွင် ကျောင်းသား/သူများအား မူးယစ်ဆေးဝါးအကြောင်း အသိပညာပေးဟောပြောပွဲကို ဇန်န၀ါရီလ ၃၀ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီက အမှတ်(၅)အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Posted by moi at 8:24 PM No comments:
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့ ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့ကို ယနေ့မွန်းလွဲ ၁နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
Posted by moi at 8:16 PM No comments:
ဖြစ်စဉ်မှန်ပေါ်ပေါက်ရေး၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ အမြန်ဖမ်းဆီးနိုင်ရေးအတွက် လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဥပဒေအကြံပေး ဦးကိုနီသည် ဇန်န၀ါရီ ၂၉ ရက် ညနေ ၅ နာရီခန့်တွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင် ရာလေဆိပ် Terminal 1 ရှေ့၌ ဦးကြည်လင်း ဆိုသူမှ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့ သည့် ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ
Posted by moi at 7:45 PM No comments:
ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်စပ် သတင်းများ အမြန်ရရှိရေး အကူအညီ ပေးနိုင်ပါရန် အသိပေး ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၃၀
၁။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD)၏ ဥပဒေအကြံပေး ဦးကိုနီသည် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံသို့ လေ့လာရေး ခရီး သွားရောက်ပြီး ပြန်လည် ရောက်ရှိစဉ် ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့
Posted by moi at 7:39 PM No comments:
ဦးကိုနီအား သေနတ်ဖြင့် အနီးကပ်ပစ်ခတ်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
၁။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ဇန်န၀ါရီလ ၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၉ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သော အကြီးတန်း ခေါင်းဆောင်မှု အစီအစဉ်ကို တက်ရောက်ခဲ့သည့် ဦးကိုနီ (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥပဒေ အကြံပေး) သည် ၂၉ - ၁ - ၂၀၁၇ ရက်နေ့
Posted by moi at 7:38 PM No comments:
ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နှစ်(၇၀) မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ ကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီ တတိယ အကြိမ် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက် အမှာစကား ပြောကြား
၂၀၁၇ ခုနှစ် နှစ်(၇၀)မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ ကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီ တတိယ အကြိမ် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ယနေ့မွန်းလွဲ (၂)နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နှစ် (၇၀)မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ ကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ တက်ရောက် အမှာစကား ပြောကြားသည်။
Posted by moi at 7:27 PM No comments:
ပြည်သူ့ အကျိုး ထိရောက်စွာ ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ရေး ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ (၃၀)
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဝင်းမြတ်အေးအား ယနေ့နံနက် (၉)နာရီတွင် ရုရှား ဖက်ဒရေးရှင်း နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Nikolay Listoadov မှ အဆိုပါ ဝန်ကြီးရုံး မေခလာခန်းမ၌ လာရောက် တွေ့ဆုံသည်။
Posted by moi at 7:06 PM No comments:
ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ကူညီပေးသော ငွေကြေးများကို အမှန် လိုအပ်သည့် နေရာတွင် သုံးစွဲရန် ဆောင်ရွက်
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၊ ဒေါက်တာ မြင့်ထွေးသည် ဇန်နဝါရီလ (၂၈) ရက်၊ နံနက် (၁၁) နာရီတွင် မြို့ချောင်း အထူးတိုက်နယ် ဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိပြီး တိုက်နယ် ဆရာဝန် ဒေါက်တာ ပြည့်ဖြိုးအောင်နှင့် ဆရာဝန်၊ သူနာပြုများ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချို အမှတ်(၆) အထည်စက်ရုံ (ဆားလင်းကြီး)နှင့် အမှတ်(၅) အထည်စက်ရုံ (ပခုက္ကူ) တို့အား ကြည့်ရှု စစ်ဆေး
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၉)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး၊ ဆားလင်းကြီးမြို့ရှိ အမှတ်(၆) အထည်စက်ရုံ (ဆားလင်းကြီး)သို့ ရောက်ရှိပြီး အထည်ချုပ်ဌာန၊ ဝါအရည်အသွေး
Posted by moi at 6:58 PM No comments:
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် လာအို ပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပညာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာနတို့ နှစ်နိုင်ငံကြား နားလည်မှု စာချွန်လွှာ လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးသိမ်းကြီးနှင့် လာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပညာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E.Mrs. Sengdeuane LACHANTHABOUNE တို့သည် ယနေ့ ညနေ ၄နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ
Posted by moi at 6:53 PM No comments:
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျပန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်၏ အထူးအကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်သည် ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်၏ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ ဟိရိုတို အိဇုမိ (H.E. Mr. Hiroto Izumi) အား ယနေ့နံနက်(၁၀)နာရီ တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
Posted by moi at 6:45 PM No comments:
စာဖတ်ရှိန် မြင့်မားရေး ကျင့်ဝတ်နီတိ ရွတ်ဆိုပြိုင်ပွဲနှင့် ဆေးရောင်ခြယ် ပြိုင်ပွဲများ တာချီလိတ်၌ ကျင်းပ
တာချီလိတ် ဇန်န၀ါရီ ၃၀
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) တာချီလိတ်ခရိုင် ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာနနှင့် မြို့နယ်ပညာရေး ဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ငယ်စဉ်ကတည်းက စာဖတ်သည့် အလေ့ကျင့် ကောင်းများ တိုးပွား ရရှိပြီး ဉာဏ်ရည် ဉာဏ်သွေးများ ထက်မြက် လာစေရန်၊ တီထွင် ဖန်တီးလိုစိတ်များ ရင့်သန်လာစေရန် ၊ စာဖတ်ရှိန် မြင့်မား လာစေရန် ကျင့်ဝတ်နီတိ ရွတ်ဆိုပြိုင်ပွဲ နှင့် ဆေးရောင်ခြယ် ပြိုင်ပွဲကို ယနေ့ ဇန်န၀ါရီ ၃၀ ရက်၊ နံနက် ၉ နာရီခွဲက ခရိုင်ရုံးရှိ ခန်းမ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by moi at 5:03 PM No comments:
ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ ဘိုးဘွား ရိပ်သာသို့ အလှူငွေနှင့် စားဆီများ လှူဒါန်း
ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးညီပု ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ဇန်န၀ါရီလ ၃၀ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀) နာရီအချိန်က ရခိုင်ပြည်နယ် ဘိုးဘွား ရိပ်သာ သို့ သွားရောက်ပြီး အလှူငွေ ကျပ် (၅) သိန်းနှင့် စားဆီ (၁၀၀) လီတာ ကို ရခိုင်ပြည်နယ် ဘိုးဘွား ရိပ်သာ စောင့်ရှောက်ရေး အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွှေထွန်းအောင် က လက်ခံရယူခဲ့ပြီး ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းလွှာများ ပြန်လည် ပေးအပ်ခဲ့သည်။
လူကုန်ကူးမှုတားဆီးရေး အသိပညာပေး ဆင့်ပွားသင်တန်းဖွင့်လှစ်
ရန်ကုန် ဇန်န၀ါရီ ၃၀
မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တိုက်အသင်းနှင့် ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း ဖွင့်လှစ်သော လူကုန်ကူးမှုတားဆီးရေး အသိပညာပေးဆင့်ပွားသင်တန်းကို (၃၀-၁-၂၀၁၇)ရက်နေ့ နံနက်(၉)နာရီ အချိန်၌ ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံး ရုပ်သံခန်းမ၌ ပြုလုပ်ကျင်းပရာ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးရဲထွန်းအောင်၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊သင်တန်းသားသင်တန်းသူများ ၊သင် တန်းပို့ချဆရာဆရာမများ တက်ရောက်ကြသည်။
Posted by moi at 12:13 PM No comments:
State Counsellor: Cherry trees symbol of Myanmar-Japan bond, also of peace
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi participated inaceremonial planting of Japanese cherry blossom trees in Nay Pyi Taw yesterday, with the aim of promoting friendship between the peoples of Myanmar and Japan and to encourage future generations to embrace peace and promote good relations.
Posted by moi at 10:17 AM No comments:
Request to voters
1. The Union Election Commission conductedadoor-to-door survey to compileacorrect voters' list for vacant constituencies for the by-elections to be held on 1st April based on that of the General Election in 2015.
Posted by moi at 10:16 AM No comments:
Almost 100,000 people visit closing day of Children’s Literature Festival in Mandalay
Nearly 100,000 people visited the Children’s Literature Festival in Mandalay yesterday, the final day of the festival.
Posted by moi at 10:15 AM No comments:
Pyithu Hluttaw speaker receives Japanese guests
Pyithu Hluttaw Speaker receives Myanmar-Japan Parliamentary Friendship Committee and Parliamentary Sakura Promotion Association of Japan HE Mr Ichiro Aisawa at the Pyithu Hluttaw Building yesterday morning.
They discussed promotion of friendship between the two parliaments, two governments and the two peoples in all sectors.
Posted by moi at 10:14 AM No comments:
Prizes presented at closing ceremony of Children’s Literature Festival in Mandalay
The closing ceremony of the Children’s Literature Festival jointly organised by the Ministry of Information and the Mandalay Region Government was held at the Myanmar Information and Institutional Technology University in Chanmyatharzi Township in Mandalay yesterday.
Posted by moi at 10:12 AM No comments:
Legal advisor to NLD assassinated at Yangon airport
A prominent legal advisor of the ruling National League for Democracy (NLD) was gunned down at Yangon International Airport yesterday upon his arrival back from Indonesia after the conclusion ofaleadership programme in Jakarta. The gunman also killedataxi driver who had tried to detain him before he was arrested by police and bystanders.
Posted by moi at 10:11 AM No comments:
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ ထိုင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် ဇန်န၀ါရီ ၂၇
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ပီစနု ဆူဗာနာဂျာတာ ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ညနေ ၃ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော် သမ္မတအိမ်တော် သံတမန်ဆောင်ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ဂျပန်နိုင်ငံ Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI)၏ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI)၏ ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ အကီအို မီမူရ ဦးဆောင်သော စီးပွားရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ယနေ့ညနေ ၄ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် နှင့်ဇနီး ကလေးစာပေပွဲတော် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတက်ရောက်
မန္တလေး ဇန်န၀ါရီ ၂၇
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ပူပေါင်းစီစဉ် ကျင်းပသည့် ကလေးစာပေပွဲတော် ကလေးစာပေပြပွဲနှင့် စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲတော် (မန္တလေး) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်(၉)နာရီတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းမြ သာစည်မြို့နယ်ရှိ မြန်မာ့သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်(MIIT)၌ ကျင်းပရာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်နှင့်ဇနီး ဒေါ်စုစုလွင်တို့ တက်ရောက် ချီးမြှင့်သည်။
Posted by moi at 5:55 PM No comments:
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျပန်နိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ် (JCCI) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ခံပုဂ္ဂိုလ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင် များ အသင်းချုပ်(JCCI) ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Akio Mimura ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဧရာဝတီခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
Posted by moi at 5:32 PM No comments:
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပပျောက်ရေး၊ ထိရောက်သောပြန်လည် ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရေး အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆွေးနွေး
နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ ၂၇
ပြည်သူ့အစိုးရအနေဖြင့်‌ ပြည်သူ့အကျိုးကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ရာ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်‌ ပြန် လည်နေရာ ချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးသည် မူးယစ်ဆေးဖြတ်သူများ ပြန်လည်
Posted by moi at 5:18 PM No comments: